कुन महिनामा जन्मिएका मान्छे हुन्छन् कति भाग्यमानी ? – List Khabar
Home / धर्म सस्किर्ती / कुन महिनामा जन्मिएका मान्छे हुन्छन् कति भाग्यमानी ?
admin4weeks ago धर्म सस्किर्ती Leaveacomment 70 Views
काठमाडौँ । हरेक व्यक्तिमा आफू कस्तो स्वभावको छु भनेर जान्ने इच्छा हुन्छ। आफ्नो मात्रै नभएर आफ्ना नजिकको साथीभाई, आफन्त र प्रेमीप्रेमिका कस्तो स्वभावका छन भनेर जान्नेहरु पनि उत्तिकै हुन्छन। कतिपयले वैवाहिक जीवन अगाडी म कस्तो युवा/युवतीसँग जोडिदै छु भन्ने कुरा बुझ्न खोज्छन।
सफा मन भएका यिनीहरुलाई परोपकारी कामले समुदायमा उच्च स्तरमा पु-याउँछ। शान्त आदत भएका यिनीहरु अर्काको मनको कुरा बुझ्छन। रमाइला भएका कारण जीवनसाथी, साथीभाई, घरपरिवारलाई खुसी राख्छ्न। माया प्रेमलाई इमान्दारिता पूर्वक कर्तव्य निभ्याउने हँुदा प्रेमीलाई खुसी राख्छ्न। परिस्थिति अनुसार निर्णय लिने यिनीहरु रिसाउदैनन।
चैत्रः ज्योतिष शास्त्रानुसार चैत्र महिनामा जन्म लिनेहरुको उच्च बौद्धिक क्षमता हुन्छ। सुन्दर मुहार कृति भएका यिनीहरु हँसिला हुन्छन। रिसाहा र अहंकारी स्वभावका हुन्छन। रचनात्मक क्षेत्रमा बिशेष रुचि राख्छन। बिलक्षण प्रतिभाका यिनीहरु परिवारको बढी ध्यान राख्छन्।
Previous रामकुमारी झाँक्रीलाई उनले रोजे अनुसारको मन्त्रालय दिनुपर्छ:प्रचण्ड
Next धेरै विल उठेपछि मालिकसँग बदला लिन भक्तपुरको होटलमा यस्तो घटना? अभियुक्तले दिएको बयान सुनेर सबै चकित!